Iley iyo Axmaar, oo si Dadban Loogu Sheegay in Ayna Jirin Cid ay Matali Karaan. – Rasaasa News
Iley iyo Axmaar, oo si Dadban Loogu Sheegay in Ayna Jirin Cid ay Matali Karaan.
Aug 14, 2009 Kilil5
Waxaa Bari Aroortii Soo gaadhi doona Magalada Stockhom, Sweden Waftigii baryahanba laga shin tirinayey ee ka Socday Kaalinka 5aad, oo laga reebay Iley iyo Axmaar, oo hore loo siiyey tababar iyo fisooyin loona sheegay in ay waftiga hogaamindoonaan.
Waftigi Isugu Jira Masuuliyiin Maamulka Kililka 5aad iyo masuuliyiin Dawlada dhexe ee Itobiya u matala Somalida Ogadeeniya, ayaa waxay caawa u soo duuleen dalka Sweden. Waftigan oo uu wato ninka horjoogaha u ah Xisbi ku sheega Kaalinka 5aad Cabdifatax Sheekh Cabdulahi, ayaa waxaa weheliya rag dhalin yaro ah oo aad Cabdifatax uga miisaan badan horena kilalka uga soo shaqeeyey. Masuuliyiinta dadwlada dhexe ayaa iyagu ah raga ugu macquulsan ee uu dhashay degaanka oo aan iyagu wax xumaan ah ka gaysan dhulka Somalida Ogadeeniya, waana Bashiir Cabdulahi Caydaruus iyo Axmed Shide wasiirku xigeenada Beeraha iyo Maaliyada.
Waxay arintu u eg tahay in sheekada la labo rogay, lagana dhex helay dadweynaha Somalda Ogadeeniya ee dibadaha jooga in ayna waji u haynin, raga waa sida ay hadalka u dhigeen ah dambiileyaal ah in ayna wanaagsanayn in loo soo diro dadweynaha dibadaha jooga. Iley, Axmaar iyo Lugbuur waxay ay yihiin dadka ugu taariikhda xun ee soo mara maamulka Kaalinka 5aad, waxaana suurto gal ah in ayna dadweynuhu waligood iloobin waxa ay galeen, waxaa kale oo iyaduna jirta inta ay ragani ku jiraan maamulka Kaalinka 5aad aad bay u adag tahay in ay dadweynaha Somalida Ogadeeniya gudo iyo dibadba aamina maamulka Kaalinka 5aad iyo Itobiya labadaba.
Waftiga waxaa laga magac dhabay dhawr nin oo Somalida Ogadeeniya ah in ay ka mid yihiin, waxaanse la sheegin Tigrayga wata magaciisa iyo waliba masuuliyada uu hayo waxaase dhab ah in kolayba uu wato masuul Tigray ah, ayna suurto gal tahay in uu yahay Toweldy.
Sida, aan is lee yahay waxaa aad u yaraan doonta xasarada lagala horyimaado dadkan waftiga ah waayo ma wataan shaadhadh wasakhasayn iyo dunuub ay hore uga galeen dadka.
Waxaanse indhaha ku hayndoonaa waxa ay u socdaan xiligan ee soo dhiiri galiyey iyo waliba cida ay uu goolkoodu yahay.
Dagaalo Kulul oo Laga Soo Sheegayo Abaaqorow